Abendlukazi bezomnotho bayazi ukuthi inyama yenkukhu iyabiza kakhulu ngentengo kunengulube noma yenkomo. Futhi ngokusho izimfanelo ukunambitheka ihlangabezana ngokugcwele nezidingo ze-gourmets eziwusizo kakhulu. Ngabe ngubani ozokwazi ukuyeka inkukhu ephuza umlomo ka "ugwayi" ngesikhumba esikhuniwe noma inkukhu ephunga elimnandi esithathwe emhluzeni ocebile? Ngaphandle kwezidlo ezilungiselelwe kusuka ku-carcass yonke, kunezinye eziningi zokupheka lapho izinyoni zisetshenziswa khona, zihlukaniswe izicucu: i-stew, pilaf, inyama "ngesiFulentshi" njll Kodwa ingabe wonke umuntu uyazi ukuthi kufanele aphile kanjani inkukhu? Phela, isidlo akufanele sibe nje esihlwabusayo, kodwa futhi sikhangayo uma sikhonzwa etafuleni. Ukusetshenziselwa inyama kufanele kube okukhethekile uma uhlela ukwenza u-pulp, ngokwesibonelo, u-roll, usebenzisa izibopho. Ngaphezu kwalokho, kwathandwa kakhulu ukukhanda shish kebab kusuka enyoni. Ama-gourmets akhethe le nyama, njengoba isidlo silungiswa ngesikhathi esifushane kakhulu futhi siphuthumayo futhi sinomsoco. Kulesi sihloko, uzothola amathiphu okuthi ungayisebenzisa kanjani inkukhu efanele yonke izitsha ezingenhla. Lungisa ummese obukhali bese uqala ukusebenza.
Indlela yokudla kahle inkukhu
Beka inyoni yenyoni ebhodini lokusika elizinzile elinesisu. Ukuthatha eceleni iphiko, yenza ukuchotshoza okujulile eceleni kwesiqu. Uzobona indawo yokunamathiselwe kokujoyina. Yenza i-jerk ekhaliphile, ngokubambe iqhaza kwesandla sokunene nokuyiqondisa phansi. Bese usika i-fiber kanye nezicubu ezinomzimba ngamakha. Futhi yenza iphiko lesokunxele. Ngokuvamile izitsha zisebenzisa lezi zingxenye zenyama yonke, kodwa ungazihlukanisa phakathi kwamathambo amabili.
Ngokufanayo, unqume amaphiko kusuka esihlalweni nasemilenzeni. Ukuhlanganiswa kuyoba ngandlela-thile emaspini, ngakho-ke kufanele uqale ukucubungula ngokujulile eceleni kwesiqu, uhlukanise i-pectoralis enkulu ukusuka esiswini. Umlenze ngamunye uhlukaniswe waba yizingxenye ezimbili ngokuhlanganyela okuhlangene.
Ngosizo lwekhisheni ekhishini usike intamo kanye nesikhumba.
Hlukanisa inkukhu ibe yizicucu ezimbili, okwenza ukubhekwa ngommese ngokuya ekugcineni kwesifuba kuya emaceleni omabili eduze kwezimbambo. Bese usule ngemuva, usike ngaphesheya kwethambo lomgwaqo.
Izikhali zihamba ngomugqa odweba ingxenye ye-thoracic enamafutha.
Le ndlela, echaza indlela yokukhukhuka kahle, inika ukuthi umsila osele kanye nezicucu zokugaya zizosetshenziselwa ukuphuza umhluzi.
Isifuba sihlukaniswe ummese ngamamitha amabili, ingxenye ngayinye ehlukaniswa ngayo zibe izingxenye eziningana. Ngalesi sigaba, ungafunda ukuthi ungayiphila kanjani i-fillet. Ngenxa yalokhu, kubalulekile ukuhlukanisa inyama, ngokusebenzisa ummese eduze kwethambo, nokukhipha ingxenye yenyama.
Inkukhu inyama isilungele ukuqhutshwa phambili!
Amathiphu ekunqumeni inkukhu ye-shish kebab
Ngokuyinhloko, izingxenye zesabelo ezitholakala ngenhla echazwe ngenhla zizofaneleka kakhulu ukubetha izinsimbi zensimbi noma izikhala endaweni yokubhaka. Njengoba inyama yenkukhu isithambile futhi ithenda ngesakhiwo sayo, akudingekile ukuba imbole imfucumfucu ngenkathi iwugcoba ibe shish kebab. Indlela engcono kakhulu ukulungisa izicucu ezihlwabusayo zebhasi.
I-rutabaga iyimifino enempilo futhi enomnandi. Izici, sebenzisa ekuphekeni
Sanibonani ngezilimi ezahlukene
Ebola: incazelo isifo
Izindlela zokuphatha udoti
Okuhlobisa usimende amagxolo - ngiphele ephelele elingaphakathi olungaphambili lwesonto
10 Amathiphu Business Better
Anastasia Meshcheryakova: ukufa kwentombazane
Vicissitudes zokuphila: Ingabe ikhona Indlovukazi Spades?